Madaxweynaha Puntland oo Itoobiya u safray markii labaad bil gudaheed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo Itoobiya u safray markii labaad bil gudaheed
April 20, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali. [Xigashada Sawirka: Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Puntland]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Khamiis ah u safray dalka Itoobiya, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Ujeedada safarka madaxweynaha ayaan cadayn, balse ilo-wareedyo dowladda katirsan ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in Madaxweynuhu uu Addis Ababa kula kulmi doono shirkado ajnabi ah, oo la filayo in ay mashaariic horumarineed ka fuliyaan gudaha Puntland.
Inta uu ku guda jiro safarkiisa, Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka qaybgali doona shirka Tana ee looga hadlo ammaanka Afrika, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Safarka Cabdiweli ee Itoobiya ayaa kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa bilowgii bishaan April, markii uu Addis Ababa tagay kadib isaga oo kasoo noqday Dubai, halkaas oo uu heshiis kula soo galay shirkada DP World si ay u horumariso una maamusho dekada magaalada Boosaaso.